Semalt: Atụmatụ na Atụmatụ dị egwu iji chebe mmegide weebụsaịtị
Ịgba ọsọ bụ nnukwu ihe ize ndụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọbụna ndị mmadụ na-eche ihu n'ụbọchị ha n'ụbọchịeme ihe. Onye nlekota ihe nwere ihe ọmụma nke ịnweta ozi nkeonwe site na ịmepụta sava weebụ ntanetịime na-ezighị ezina iji ihe nkesa dị ka transmitter spam. Ndị na-agba ọsọ na-elekwasị anya na ebe nrụọrụ weebụ nwere naanị nchebe dị mkpa.
Nik Chaykovskiy, Onye Ọrụ Ndị Nlekọta Ndị Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Gbasara Ọkachamara ,maara otú e si egbochi ndị omempụ cyber si hacking:
Ọ dị oke mkpa imelite ngwa oru weebụ niile n'oge ọ bụla o kwere omume - شركة رش مبيد فى المدينة المنورة . Ụzọ a,usoro ahụ na-echebe onye ọrụ ma gbochie ndị na-agba ọsọ na ịnweta saịtị ahụ. N'ihi ya, ọ gaghị ekwe omume na ndị iro ga-esi n'ime ime obodonweta ma jiri ya megide onye nwe ya. Onye nwere ike iji CMS Providers dị ka Magento na-ebute mmelite na nkwụnye ins na weebụsaịtị ọtụtụjiri. Ime omume dị otú ahụ na-eme ka onye nwe saịtị nwee nzọụkwụ n'ihu iji gbochie ndị na-agba ọsọ na-enwe obi ọjọọ iji nwetaghachi ụzọ nbata n'ime saịtị.
Wụnye nchekwa nchekwa
Mgbe ị na-emelite ngwanro niile, jide n'aka na ị ga-eji okpukpu abụọ mee ka ebe nrụọrụ weebụ dị site na ịwụnyenchekwa nchekwa dị ka iThemes nke nwere ike ịchọpụta ụdị ọ bụla nke hacking ma dozie ya. Ntube nchekwa site na SiteLock nwere ike ịmata mawepu ihe omume niile a na-achọghị ma chọpụta ihe ọ bụla e kere.
Usoro Ịnyefe Mfe ederede Hyper Secure (HTTPS) bụ usoro nchedo nke na-eme ka o doo anyaezoro ezo nke nkwukọrịta niile jikọtara n'etiti nchọgharị na weebụsaịtị. Nzube ya bụ ịnọgide na-eguzosi ike n'ezi ihe nke ukwuu nzuzoozi dị ka data kaadị akwụmụgwọ na okwuntughe..Ndị ọkachamara na-atụ aro na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-eji ndụmọdụ a maka ọnụ ụzọ ha. Ijiiji chọpụta nchebe karị, onye ọrụ kwesịrị iji HTTPS dị na Nche Socket Layer (SSL), na Nchekwa nchekwa nchekwa.
SQL ogwu ogbugba agha bụ mgbe a hacker nwere ike inwe ike ịnweta onye ọrụ kacha mkpaozi iji ederede URL ma ọ bụ ụdị weebụ. Iji gbochie ọgụ mgbochi nje ogbugba, otu onye ga-eji ajụjụ ndị akwadoro. Ha na-akwado naihe odide nke ebe nrụọrụ weebụ nwere oke nkeji iji gbochie ohere ọ bụla maka ndị na-egwu hackers.
Jiri Mpempe Nche Nchebe
Nkọwa Cross-site (XSS) na-abụkarị ọgụ ebe onye na-egwu ihe na-eme ihe ọjọọederede na ebe nrụọrụ weebụ akwadoro. Ajụjụ gbara ajụjụ bụ ngwaọrụ eji egbochi mwakpo ndị a iji hụ na ọ dịghị ohere ọ bụla nwere ohere ọ bụlamaka ndị ọgba ọsọ na-abanye. Atụmatụ nchebe ọdịnaya dị oke mkpa na-egbochi ọgụ XSS ka ha na-ekwe ka nbanye site na ngalaba ndị a kapịrị ọnụ.Nanị ihe nchịkọta ihe nchọgharị ahụ ma na-enye ohere ka ị banye na isi mmalite edemede. CSP na-achọpụta ihe nchọgharị ndị dị irè na ndị na-abụghị eziokwu.
Ọ dị mkpa ka onye nwe saịtị ahụ jiri okwuntughe dị mgbagwoju anya nke ndị omempụ enweghị ikechọpụta nke ọma. Ọ na - eme ma ọ bụrụ na onye nwe ya jikọtara mkpụrụ edemede pụrụ iche, nọmba, na akwụkwọ ozi maka paswọọdụ ha.
Ịmepụta Ntuziaka Admin
Ndị na-eme ihe ike nwere ike iṅomi akwụkwọ ntuziaka na nchịkwa ndị nchịkwa site na sava weebụ.Ha nwere ike ịchọ aha ndị dị ka 'ohere,' si otú ahụ na-eme ka onye nwere ike ịnweta ike mee ka nchebe nke ebe nrụọrụ weebụ ghara ịda mbà. Iji belata ohere nkenke a na-eme, jide n'aka na ịnyegharị aha nchekwa niile.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ịnọ n'akụkụ nchebe site n'ịkwụ ụgwọ dollar maka ihe nchekwa kacha mma.N'okwu a, a na-atụle asaa n'ime ndụmọdụ kachasị mma nke ga-amalite na ebe nrụọrụ weebụ ahụ.